UMphathiswa waseSeychelles ophakamisa uMyalezo ngoSuku lwezoKhenketho lweHlabathi
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zaseSeychelles ezaphulayo » UMphathiswa waseSeychelles ophakamisa uMyalezo ngoSuku lwezoKhenketho lweHlabathi
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Iindaba zikaRhulumente • Icandelo lokungenisa izihambi • Iihotele kunye neeholide • Utyalo mali • iintlanganiso • iindaba • abantu • Iindaba zaseSeychelles ezaphulayo • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo
UMphathiswa waseSeychelles ngoSuku lwezoKhenketho lweHlabathi
Ngale mini minyaka le, iSeychelles ijoyina amanye amazwe angama-158 oMbutho wezoKhenketho weHlabathi (i-UNWTO) kwisikhumbuzo soSuku lweHlabathi lezoKhenketho. Olu suku lubalaselisa ukubaluleka kweshishini lokhenketho nokhenketho, kananjalo nanjengomhla wokubhiyozela nokubonakalisa. Phantsi komxholo wethu othi "Ukubumba ikamva lethu," siqhwabela izandla abantu bethu negalelo labo.
Yonke iSeychellois, onke amacandelo emisebenzi yezoqoqosho elizweni kufuneka athabathe inxaxheba kwinkqubo yokukhula okubandakanya wonke umntu.
Ngenxa ye-COVID-19, njengawo onke amanye amazwe emhlabeni, iSeychelles yajongana nokuwa okusondeleyo kwishishini lokhenketho.
Isizwe sakhawuleza saqonda ukuba ukuziqhelanisa neemeko eziguqukayo yeyona nto iphambili ekusindeni.
I-UNWTO ichonge uSuku loKhenketho lweHlabathi lowama-2021 njengosuku lokugxila kuKhenketho kuHlumo oluBandakanyayo. Ukukhula okubandakanyayo yinto esizama ukuyizama njengoko sifuna ukubuyela kwimeko yesiqhelo. Kwaye iya kuqhutywa kukhenketho. Ichaphazela ngamnye wethu, kwaye neSeychellois, onke amacandelo omsebenzi wezoqoqosho kwilizwe lethu kufuneka athabathe inxaxheba kule nkqubo. Ingakumbi kule “iqhelekileyo”.
Ukujongana nokuwa okusondeleyo kweshishini lethu, saqonda ukuba ukuziqhelanisa neemeko eziguqukayo yeyona nto iphambili ebomini bethu. Sithathe umngcipheko omkhulu kodwa obaliweyo, ukudibanisa ukubuyisela uqoqosho kunye nokukhusela impilo kunye nokukhuseleka kwabantu bethu kunye neendwendwe zethu ngokusungulwa kwasekuqaleni kuka-2021 kwenkqubo yokugonya eyomeleleyo nephangaleleyo yokulwa i-COVID-19, esivumela ukuba ngesibindi sivulele umhlaba ngoMatshi. Ngoku sivuna izabelo zala manyathelo siwathathe kunye.
Kodwa akufuneki, kwaye asikwazi ukungakhathali. Asisodwa ekuziqhelaniseni nesiqhelo. Abo sikhuphisana nabo banoburharha ngokulinganayo kwaye banobuchule kumaphulo abo okuthengisa ezokhenketho. Xa sijongene nokhuphiswano olungenasiphelo, kufuneka siqhubeke nokunikela ngexabiso lemali. Kufuneka siqinisekise ukuba indawo yokuhlala kunye neenkonzo esizinikezelayo zikwimigangatho, kwaye zigqwesile kunoko kwamkelweyo noko kulindelweyo. Kuya kufuneka sigxile ngakumbi ekunikezeleni isidanga esikhulu samava okhenketho asekwe eluntwini abonisa uphawu lwethu. Kananjalo, kwaye kungabalulekanga kangako, kufuneka siqhubeke nokusiphula neengcambu zonke iindlela ezingekho mthethweni nezenziwa ngokungekho mthethweni ezijongela phantsi ushishino lwethu lokhenketho nokubuk 'iindwendwe, kwaye uzise ihlazo kumfanekiso wethu.
Ngale mini uSuku loKhenketho lweHlabathi, ndicela ubunye, ubunye kwicandelo lokhenketho. Kungenxa yokuba, ngaphaya kwezibalo, siyazi ukuba ngasemva kwenani ngalinye malunga nolu shishino, kukho umntu osebenzayo, kukho abantu basetyhini kunye namadoda. Ukunyusa ishishini lethu lezokhenketho lifikelele kwimigangatho ephezulu kwaye soyise imiceli mngeni engaphambili, ngaphandle kokujongela phantsi nabani na, kufuneka simanyane. Ngabo bonke babelana ngombono omnye kunye nomnqweno ofanayo ukubona ukhenketho luchumaNgokusebenza ngokukodwa ngokubambisana, siza kuphumelela. Akukho mathandabuzo.
Sincoma kakhulu ukuzinikela kwakho kunye nomdla wakho, siyabulela kuwe ngokubeka iintliziyo zethu kushishino lokhenketho.
Namhlanje siyakubhiyozela. Usuku Olumnandi Lwehlabathi Lwezokhenketho!